Free Download Adobe Photoshop Qaybaha for Mac | MacArsenal
> Resource > Mac > Adobe Systems: Adobe Photoshop Qaybaha for Mac
Adobe Photoshop Qaybaha waa software ah sawir tafatir oo ku haboon sawir oo ka imaneysay.
Waa sahlan tahay, waayo, dadka isticmaala si xaalkaa photos by khalkhalgelinta fudud. Waqti aad u badan oo aad u baahan wax ugu bixinwaydeen barashada sida loo isticmaalo. Interface waxay kuu muujinaysaa in siyaabo toos ah si aad si fudud u maarayn karaan sawiradaada.
Bixi hanuunka users
Itusi hagayo awood u isticmaala inay xaalkaa photos si aad u hesho saamaynta sida saamayn Orton. Tani waa run ahaantii waxtar u leh kuwa u isticmaali markii ugu horeysay. Waxay ku siinaysaa tilmaan iyo aad go'aansato in aad u isticmaasho ama aan.
Si toos ah abaabulaan sawiro
Qaybaha Abaabulaha waxtar ah oo lagu maareeyo sawiro. Waxaa si toos ah u eegi kartaa sawiro la mid ah aad si aad iyaga la haboon qaban kara. Sidaas waxaad ku ogaan doontaa waxa aad si fudud u baahan tahay.
Sida software tafatirka sawir, Adobe Photoshop Qaybaha siisaa dadka isticmaala awood badan, fursadaha si sahlan loo isticmaali sixiddiisa sawirada. Waxaan iyaga wadaagi karaa print, internetka, Facebook, iyo in ka badan.
Waxay leedahay jawi saaxiibtinimo iyo dareen aad u abaabulo, edit, la abuuro iyo sawiro si fudud oo dhaqso. Haddii aad u isticmaali markii ugu horeysay, ma jirto baahi loo qabo in walwalo wax tafatir ah. Itusi hagayo kaa caawin doona inaad hesho saamaynta aad rabto. Laakiin haddii aad rabto in aad ka badan la yaqaan, waxaa ka barato. Interface baa laga beddeli karaa sida aad rabto. Photoshop Qaybaha Abaabulaha caawiyo in aad abaabulo photos iyo raadiyo sawiro aad rabto. Ururku waxa uu si toos ah kor u waxtarka tafatirka. Taasi macnaheedu waa in aad edit karaa badan, wakhtiga ah.
Adobe Photoshop Qaybaha waa ku weyn yahay, waayo, ujeeddo kasta ee photos tafatirka. Tani waa caawimo ee weyn si ay u xaliyaan arrimaha aad sawiro.